Guul la gaadhay iyo Khuuradii oo Dawo loo Helay! - Daryeel Magazine
Guul la gaadhay iyo Khuuradii oo Dawo loo Helay!
Dadka intooda badani ma helaan hurdo ku filan habeenkii, halka dad faro-badanina ay hurdo diidaan taa macnaheedu maaha in aanay si fiican u shaqeynaynin marinka neefsashadu, laakiin in ka badan malaayiin dad ah waxa ku dhaca hurdo yaraan, taasina waxay ku tusinaysaa inay u tahay astaanta, xaalad khatar caafimaad darro oo ku timaada qofka.
Hurdo Intee Le’eg Ayuu Qofku U Baahanyahay Bisha Ramadaan? 7 Dhibaato Oo Laga Dhaxlo Dhafarka Badan Iyo Talooyin Sidee Guul Loo Gaadhaa? Liin Dhanaanta Oo Dawo Ka Ah Buurnida Iyo Xanuunada Laga Qaado